Fahatakarana ho any amin'ny mandrakizay - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-02 mpandimby ny Magazine > Fanandramana any amin'ny mandrakizay
Nampahatsiahy ahy ny seho tao amin'ny sarimihetsika tantara foronina siantifika rehefa nandre momba ny fahitana planeta mitovy amin'ny Tany antsoina hoe Proxima Centauri aho. Izy io dia eo amin'ny orbitan'ny kintana mena raikitra Proxima Centauri. Na izany aza, tsy azo inoana fa hahita fiainana any an-danitra isika (amin'ny halavirana 40 trillion kilometatra!). Na izany aza, ny olona dia hanontany tena foana raha misy fiainana mitovy amin'ny olombelona ivelan'ny tanintsika. Ho an'ny mpianatr'i Jesosy dia tsy nisy isalasalana - vavolombelon'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra izy ireo ka noho izany dia nahalala tanteraka fa ilay olona Jesosy ao amin'ny vatany vaovao dia miaina ao amin'ny tontolo ivelan'ny tany, izay antsoin'ny Soratra Masina hoe "lanitra" - tontolo izay tsy misy ifandraisany mihitsy amin’ireo “tontolo any an-danitra” hita maso izay antsointsika hoe izao rehetra izao.
Zava-dehibe ny mahafantatra fa i Jesosy Kristy dia, Andriamanitra tanteraka (ilay Zanak’Andriamanitra mandrakizay), nefa koa ary mitoetra ho olombelona tanteraka (ilay lehilahy nomem-boninahitra ankehitriny). Araka ny nosoratan'i CS Lewis, "Ny fahagagana fototra ijoroan'ny Kristianina dia ny Fahatongavana ho nofo" - fahagagana izay haharitra mandrakizay. Ao amin’ny maha-Andriamanitra Azy dia eo amin’izao rehetra izao i Jesosy, fa amin’ny fitohizan’ny fisiany olombelona dia miaina ara-batana any an-danitra izy, izay manompo amin’ny maha-mpisorona lehibe antsika sy miandry ny fiverenany ara-batana sy hita maso eto an-tany. Jesosy dia Andriamanitra-olona sy Tompon’ny zavaboary rehetra. Manoratra ao amin’ny Romana i Paoly 11,36: "Fa Izy no nihavian'ny zavatra rehetra, ary Izy no nihavian'ny zavatra rehetra." Nanonona an’i Jesosy ao amin’ny Apokalypsy i Jaona 1,8, amin’ny maha-“Alfa sy Omega” izay ao, izay teo sy ho avy. Nanambara ihany koa i Isaia fa i Jesoa no “avo sy manerinerina” izay “mitoetra mandrakizay” (Isaia 57,15). Jesoa Kristy, ilay Tompo misandratra sy masina ary mandrakizay, no mpanatanteraka ny drafitry ny Rainy, dia ny fampihavanana izao tontolo izao.
Andeha hojerentsika ny fanambarana ao amin’ny Jaona 3,17:
"Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao." Na iza na iza milaza fa tonga hanameloka izao tontolo izao i Jesosy, amin’ny heviny hoe manameloka na manasazy, dia diso tsotra izao. Ireo izay mampizarazara ny olombelona ho vondrona roa - ny iray voalahatra mialoha hovonjen'Andriamanitra ary ny iray voalahatra mialoha hohelohina - dia diso koa. Rehefa nilaza i Jaona (angamba nanonona an’i Jesosy) fa tonga “hamonjy izao tontolo izao” ny Tompontsika, dia manondro ny olombelona rehetra izany fa tsy antokon’olona iray ihany. Andeha hojerentsika ireto andininy manaraka ireto:
"Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny Ray efa naniraka ny Zanaka ho Mpamonjy izao tontolo izao" (1. Johannes 4,14).
“Indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an’ny olona rehetra.” (Lioka 2,10).
“Koa tsy sitraky ny Rainareo any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin’ireny madinika ireny” (Matio 1.8,14).
"Fa Andriamanitra tao amin'i Kristy ka nampihavana izao tontolo izao taminy" (2. Korintiana 5,19).
"Indro, ity no Zanak'ondrin'Andriamanitra izay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao!" (Johanes 1,29).
Tsy afaka ny hanantitrantitra fotsiny aho fa i Jesosy no Tompo sy mpamonjy izao tontolo izao ary na dia ny voaary iray manontolo aza. Io dia nohamafisin'i Paoly ao amin'ny Taratasy ho an'ny Romana, toko faha-8 ary Jaona manerana ny bokin'ny Apokalypsy. Izay namorona ny alalàn'ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia tsy azo vakivaky ho an'ny tsirairay. Augustine dia nanamarika hoe: "Ny asan'ny ety ivelany [momba ny zavatra noforoniny] dia tsy misy fanavahana." Andriamanitra Trio izay Ilay iray dia miasa ho iray. Ny sitrapony dia sitrapo ary tsy voatanisa.
Mampalahelo fa misy ny olona milaza fa ny ra nalatsak'i Jesosy dia manavotra izay nofidin'Andriamanitra hovonjeny ihany. Ny ambiny, hoy ny filazany, dia natao ho fanamelohana an'Andriamanitra. Ny tena fototr'io fahatakarana io dia ny fizarana ny fikasan'Andriamanitra dia mifandraika amin'ny zavatra noforoniny. Na izany aza, tsy misy andininy ao amin'ny Baiboly izay mampianatra io fomba fijery io; Ny fangatahana an'io karazan-javatra io dia fandisoana diso ary tsy miraharaha ny lakile iray manontolo, dia ny fahalalana ny toetra, ny toetra ary ny tanjon'ilay triatra, izay nambara tamintsika tao amin'i Jesosy.
Raha marina fa sady nikendry hamonjy sy hanameloka i Jesosy, dia tsy maintsy hanatsoaka hevitra isika fa tsy nisolo tena ny Ray araka ny tokony ho izy i Jesosy, ka noho izany dia tsy afaka mahafantatra an’Andriamanitra amin’ny tena maha-izy azy isika. Tokony ho tonga amin’ny fanatsoahan-kevitra ihany koa isika fa misy ny tsy firaisan-kina ao amin’ny Trinite ary ny “lafiny” an’Andriamanitra iray ihany no nasehon’i Jesosy. Ny vokatr'izany dia ny tsy hahafantarantsika izay "lafin'Andriamanitra" tokony hatokisana - tokony hatoky ny lafiny hitantsika amin'i Jesosy ve isika sa ny lafiny miafina ao amin'ny Ray sy / sa ny ao amin'ny Fanahy Masina? Ireo fomba fijery hafahafa ireo dia mifanohitra amin’ny Filazantsaran’i Jaona, izay nanambaran’i Jesosy mazava tsara fa nampahafantatra ny Ray tsy hita maso tamin’ny fomba feno sy marina Izy. Ilay Andriamanitra nambaran’i Jesosy sy tao amin’i Jesosy dia Ilay tonga hamonjy ny olombelona fa tsy hanameloka azy. Ao amin’i Jesosy sy amin’ny alalan’i Jesosy (Mpisolovava sy Mpisoronabe mandrakizay) no omen’Andriamanitra antsika ny hery ho tonga zanany mandrakizay. Amin'ny alalan'ny fahasoavany no miova ny toetrantsika ary izany dia manome antsika ao amin'i Kristy ny fahatanterahana izay tsy ho azontsika na oviana na oviana. Tafiditra ao anatin’izany fahatanterahana izany ny fifandraisana mandrakizay sy tonga lafatra ary ny fiombonana amin’ilay Andriamanitra Mpamorona masina sy masina, izay tsy misy zavaboary afaka mahazo amin’ny alalan’ny tenany – na i Adama sy i Eva aza talohan’ny Fahalavoana. Noho ny fahasoavana no ananantsika firaisana amin’Andriamanitra telo izay iray, izay mijoro ambonin’ny habakabaka sy ny fotoana, izay taloha sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Ao amin’io fiaraha-monina io dia nohavaozin’Andriamanitra ny vatantsika sy ny fanahintsika; nomena toetra vaovao sy tanjona mandrakizay isika. Ao amin’ny maha-iray antsika sy ny fiombonantsika amin’Andriamanitra, dia tsy atao ambanin-javatra, na variana na ovaina ho zavatra tsy izy isika. Fa amin’ny alalan’ny fandraisana anjara amin’ny maha-olombelona nitsangana sy niakatra tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina tao amin’i Kristy, dia entina ao amin’ny fahafenoana sy ny fahatanterahan’ny maha-olombelona antsika miaraka aminy isika.
Miaina amin'izao fotoana izao isika - ao anatin'ny fetran'ny habaka sy ny fotoana. Fa amin’ny alalan’ny firaisantsika amin’i Kristy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina dia miditra amin’ny sakana ara-potoana isika, satria i Paoly dia manoratra ao amin’ny Efesiana. 2,6fa efa tafaorina any an-danitra isika ao amin’ilay Andriamanitra nitsangana tamin’ny maty Jesosy Kristy. Nandritra ny fisiantsika ephemeral eto an-tany dia voafatotry ny fotoana sy ny habaka isika. Amin'ny fomba tsy takatsika tanteraka dia olom-pirenen'ny Lanitra mandrakizay isika. Na dia miaina amin’izao fotoana izao aza isika dia efa miombona amin’ny fiainana, ny fahafatesana, ny fitsanganan’i Jesosy amin’ny maty ary ny fiakaran’ny Fanahy Masina. Efa mifandray amin’ny mandrakizay isika.
Satria marina ho antsika izany, dia resy lahatra isika fa mitory ny fitsipiky ny Andriamanitsika mandrakizay. Avy amin'ity toerana ity no iandrandrantsika ny fahafenoan'ny Fanjakan'Andriamanitra, izay hiainantsika mandrakizay ao amin'ny firaisana sy ny fiarahana amin'ny Tompontsika. Andao hifaly amin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny mandrakizay.